“Gaaffii kamiifuu ajjeechaan deebii hinta'u” - Obbo Lammaa Magarsaa
Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa gidduutti uumameen lubbuun lammiilee hedduu darbeera; qaamniis hir'ateera. Rakkoo kanaan walqabatee lammiilee hedduun bakka jiraachaa turan irraa buqqa'aniiru; qabeenyisaaniis barbadaa'eera.
Rakkoon kun ammayyuu akkuma ittifufetti jira. Rakkoo kanaafi kanneen biroon walqabatee barattoonni yunivarsitiiwwan biyyattii hedduu keessatti adeemsi baruu barsiisuu akka gufatu ta'eera. Lubbuun barattoota hedduus sababuma kanaan darbeera.
Qaama kamiinuu haata'u ajjeechaan lammiilee irratti raawwatamu rakkoo nageenyaa uumame kan furu miti. Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaa ibsa torban darbe OBNf kennaniin akka jedhanitti, “Gaaffii Kamiifuu ajjeechaan deebii hinta'u.” Kanaafuu mootummaan rakkoon kun battalatti akka dhaabbatuuf hojjechuu qaba.
Bakka qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa, Somaaleefi Federaalaa buufatanii jiranitti yakkichi ajjeechaa lammiileerratti raawwatameera. Yakki kun raawwatamuun qaamoleen nageenyaa naannawa sana jiran maal hojjechaa akka jiran gaaffii keessa galcha.
Rakkoo kanaafi kanneen birootiin walqabatee hojiin baruu barsiisuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hanga yunivarsitiiwwan biyyattii keessumaa naannoo Oromiyaatti akka gufatan ta'eera.
Rakkoo dhimma daangaatiin walqabatee Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa gidduutti uumame karaa nagaatiin furuun, lammiilee qe'ee ofiirraa buqqa'an gargaaruufi gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif wabii nageenya isaanii mirkaneessuun gahee olaanaa mootummaa irraa eegamuudha.
Rakkoon walti bu'iinsaa kun erga eemamee bubbuleera. Haata'u malee hanga ammaatti furmaata waaraa hinarganne. Qaamoleen lammiileerratti yakka ajjeechaa raawwatanis gaafatamuufi dhiisuunsaanii ummataaf hanga ammaatti waanti ibsame hinjiru.
Mootummaan federaalaas ta'e naannoo qaamolee yakka ajjeechaa raawwachaa jiran hanga ammaatti akkamitti to'achuu akka dadhabaniifi qoratanii seeratti dhiyeessuu akka dadhaban anaaf hingalle. Rkkoon kun hanga yoomiitti akkasitti ittifufa gaaffii jedhus sammuu keessatti na uumeera.
Walumaagalatti, rakkoo nageenyaa sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaafi Somaalee gidduutti uumameefi gaaffiilee barattoonniifi ummatni bakkeewwan adda addaatti kaasaa jiran callisanii dhaggeeffachuun sirrii waan hintaaneef mootummaan deebii rakkoo uumame furuufi nageenya mirkaneessuu hatattamaa kennuu qaba.
Torban kana/This_Week 43550
Guyyaa mara/All_Days 1468330